War cusub oo kasoo kordhaya arrinta laacibka Gabriel Barbosa – Gabigol! (Maxaa dhacay?) – Gool FM
Heegan oo guul muhiim ah kaga gaartay Horseed kulan ka tirsanaa horyaalka Somali Premier League.
Wakiilka ciyaaryahan Milan Skriniar oo sheegay in Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ay wada doonayaan xiddigan
War cusub oo kasoo kordhaya arrinta laacibka Gabriel Barbosa – Gabigol! (Maxaa dhacay?)
Raage August 27, 2016
(São Paulo) 27 Agoosto 2016 – Gabigol ayaa dib ugu laabtay dalka Brazil, maaddaama aysan Santos weli go’aan ka gaarin inuu xagaagan ku biirayo Inter iyo inuu iman doono Jannaayo, halka Joao Mario uu caafimaadka marayo haatan.
Kooxda Nerazzurri ayaa shalay soo dhowaysey labadan laacib ee muhimka ah, kuwaasoo ay isu gayn ahaan ku beeshay €70m, waloow aan weli la rasmiyaynin soo wareegistooda.
Yeelkeede, sida uu dhigayo Sky Sport Italia, Gabriel Barbosa – oo caadiyan loo yaqaanno Gabigol – ayaa dib ugu duulay dalkiisa Brazil kaddib markii uu ku baasay tijaabada caafimaadka isla markaana uu tibxaha heshiiska la meel dhigay Inter.
Haddaba, wixii haatan la sugaba waa go’aanka Santos iyo wixii ay ka yiraahdaan inuu laacibku imanayo isla suuq-xagaagan iyo inuu iman doono bisha Jannaayo 2017, balse madaxwaynaha Santos ee Modesto Roma ayaa sheegaya inuu go’aanka ugu wayn uu laacibku leeyahay.
XOG: Laacibka Mario Pašalić oo tijaabadii caafimaad ee AC Milan ku guulaystey!
DEG DEG: Xulka Talyaaniga oo la magacaabay, wejiyo cusub & Donnarumma oo taariikhda galay!
Heegan oo guul muhiim ah kaga gaartay Horseed kulan ka tirsanaa horyaalka Somali Premier League. https://t.co/KJZSEcrPe3
Wakiilka ciyaaryahan Milan Skriniar oo sheegay in Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ay wada doonayaan xiddigan. https://t.co/fvOqzdWjRQ
Lionel Messi oo tan iyo Koobkii Adduunka caawa dib ugu soo laabanaya xulkiisa Argentina https://t.co/wReNGlqRYU